Lafta-gareen ayaa Mogadishu kula kulmay safiiradda dalalka Turkiga iyo Qatar ee u fadhiya… – Hagaag.com
Lafta-gareen ayaa Mogadishu kula kulmay safiiradda dalalka Turkiga iyo Qatar ee u fadhiya…
Posted on 3 Janaayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho safiiradda Dowladaha Turkey iyo Qatar u fadhiya Soomaaliya.
Madaxweyne Lafta-gareen ayaa safiiradda Turkiga Mehmet Yilmaaz iyo kan Qatar Xasan Bin Xamza kala hadlay weerarkii Al Shabaab shalay ku qaaday Injineerada Turkiga ah ee ku howlanaa dhismaha wadada isku xirta magaaladda Muqdisho ee caasimadda wadanka iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha hoose.
“Waxaa Madaxweynuhu ka Tacsiyadeeyey Qaraxii Argigixisada Al Shabaab ay ka Geysteen Wadada Xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo Sababay khasaaro isugu jira Dhimasha iyo Dhaawac” ayaa lagu yiri war ka soo baxay Madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen, ayaa sidoo kale kala hadlay Safiiradda Qatar iyo Turkiga oo mashruucan wadajir u fulinaya sidii loo sii wadi lahaa dhamaystirka wadadaan oo muhiim u ah isku socodka magaaladda Caasimadda ah ee Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha hoose.
Kulankan ayaa dhacay kadib markii uu Madaxweyne Lafta-gareen maanta dalka dib ugu soo laabtay ka dib safar uu ku maqnaa dalka Turkey mudooyinkii dambe.